Anjariliva - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Ts d tena haiko loatra ny momba azy, miangavy izay mahalala b b kokoa ny momba azy mba hanampy na hanitsy izay diso.
Mpikambana ao @ Faribolana Sandratra izy, Mpanentana sy mpanolotra fandaharana koa ao @ Radio don Bosco
amfhaja (11/03/2008 09:50:44)
izy ihany koa no manjatiana, izay tantara malaza t@ radio nationaly malagasy, vavy tokana izy eo @ fianakaviany ary telo lahy ny zandriny, mahafa-trapo @ fanentanana tokoa izy, ary talentany mihitsy ilay manentana na eo anivon'ny fianakaviany aza, 12 novembre ny andro nahaterahany fa tsy tadidiko kosa ny taona raha tsy diso aho dia t@ 1972 na 73 tany ho any izy no teraka, olona anisany mahay mihira Anjariliva, ary Liva no tena fiatsoana azy, raha mbola mahita ny mombamomba azy aho de ampidiriko eto ihany
amfhaja (11/03/2008 09:50:45)
amfhaja (11/03/2008 09:50:47)
Rhasinats (20/08/2011 14:30:57)
Misaotra an'i amfhaja nilaza ireo zavatra fantany ireo. Ny tenako dia mpanaraka tsy tapaka ny RDB.Tena mendrika tokoa i Anjariliva na eo amin'ny fanentanana, na eo amin'ny fanatontosana, na eo amin'ny fanolorana ny fandaharana izay hiandraketany. Tena hainy tsara ny mampifandrindra ny mahasoa sy ny mahafinaritra koa hisaorana azy be dia be izany. Mety azo atao ve ny miserasera mivantana aminy eto amin'ity sehatra ity ohatra ? Misy mantsy ireo tsirin-kevitra tiana hifanakalozana aminy raha mety izany.
Dia misaotra mialoha aminareo izay afaka manome fanampi-panazavana na mampita ny hafatra.
harisonmahery14 (04/09/2014 15:19:44)
maniry hifandray amin'i Anjariliva aho, niaraka nanao atelier elaboration des materils IEC izahay tamin'ny 1996, misy traikefa tiako hifampizarana aminy izay notovozina nandritra izay 18 taona tsy nihaonana izany, raha azo atao ny manome contacte momba azy harisonmahery@gmail.com no adiresiko misaotra mialoha
Nampiditra : ledada
Daty : 17/11/2006
Mpamangy : 2875